THANLWIN AUNG Construction Co.,Ltd
Thukha Street, Hlaing
Thumana4Street, Thingangyun
Thida Yaysin Street, Thingangyun
Kyi Taw Ward, Mingalar Taung Nyunt
သံလွင်အောင် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်သည် မိသားစုပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် အမှတ် (၃၉၂၁) ဖြင့် (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ကန်ထရိုက်တာ လိုင်စင်အမှတ် YCDC LC - 669 ကို လည်း ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် နည်းစနစ်အသစ် တီထွင်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်း နှင့် တိုးတက်လာသော ဆောက်လုပ်ရေး နည်းပညာများနှင့် အတူ ကောင်းမွန် သေသပ်သော အဆောက်အဦး တစ်ခု ရရှိရန် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်ထား ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော အဆောက်အဦးတစ်ခု ရရှိရန်မှာလည်း အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာများ၊ ၀န်ထမ်းအားလုံးနှင့် တကွ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော လုပ်သားများဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလည်း လိုအပ်သော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ နှင့် တန်ဆာပလာများကို လျင်မြန်စွာ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပြီး အချိန် နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ထမ်းများ နှင့် အလုပ်သမားများ အားလုံး ဘေးကင်း လုံခြုံ၍ ပျော်ရွင်စွာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိူင်ခြင်း သည်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော ဓလေ့စရိုက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီသည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အစဉ်တစိုက် လေ့လာအားထုတ် ဆောက်လုပ်နေသည့် မြန်မာနိူင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလည်း ဌာနဆိုင်ရာများမှ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေများ (YCDC By Laws) နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးများ အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ပြဌာန်းချက်များ (Rules and Regulations of CQHP) ကိုလည်း တိကျစွာ လိုက်နာသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် စေတနာတို့သည် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ထပ်တူ ကျပါလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီနှင့် ယုံကြည်စွာ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားရန် မျှော်လင့်လျက် ရှိပါသည်။
OFF : No.166-B, Rm. 1-B, Thukha 54 Street, Hlaing TSP, Yangon, Myanmar.
Call us now: 09 500 1133, 01 230 5392
Copyright © 2016 THANLWIN AUNG Construction Co.,Ltd | Powered By Yangon Directory